KHANDBARI – sajilO Online
By Geetanjali Bhavuk,2months ago October 3, 2018
हाम्रा सेवाहरु अर्जेन्ट पासफोटो / MRP PHOTO ठुलो फोटो तथा फ्लेक्स फोटो कलर फोटोकपी तथा लेमिनेसन होडिङबोर्ड/ब्यानर प्रिन्ट विवाह ब्रतबन्धको कार्ड प्रिन्ट प्रमाण -पत्र/भिजिटिङ कार्ड प्रिन्ट स्टिकर तथा पोस्टर प्रिन्ट जर्सी प्रिन्ट, भेस्टमा फोटो प्रिन्ट कप, प्लेटमा फोटो प्रिन्ट फ्लेक्स ब्यानर प्रिन्ट थप जानकारीका लागि Khandbari -1, deurali tol Pro Read more…
खाँदबारी – १, पोखरी बजारमा अवस्थित ‘सोल्टी फास्ट फुड’ मा सम्पूर्ण आइटमका फास्ट फुड पाइन्छ ! खाजा नास्ताको लागि एक मात्र उत्कृष्ट ठाउ हो ! थप जानकारीका लागि Pro : Dipak Kumar Sunuwar Contact : 9852058180
S5मोटरसाइकल वर्कसप
यहा मोटर अटो रिक्साका गाडी मर्मत गर्नुका साथै पेट्रोल इन्जिनका गाडीहरु पनि मर्मत गरिन्छ ! Pro : Santosh Paudel Khandbari –3Contact : 9852051949
ममता अटो रिपेयरिंग एण्ड बाइक वर्कसप
यहा मोटरबाइक रिपेयरिंग गर्नुका साथै पार्ट्स पुर्जाहरु बिक्रि वितरण गरिन्छ ! थप जानकारीका लागि Pro : Naresh Kumar Rai Khandbari -3, Sankhuwasabha Contact : 9852051874/9824321054
सक्षम मोटर वोर्कसप
यहा विभिन्न गाडीहरु रिपेयरिंग गर्नुका साथै मोटरसाइकल सम्बन्धि सम्पूर्ण पार्ट्स पुर्जाहारु पाइन्छन् ! थप जानकारी लिनका लागि Pro : Raj Shreshth Khandbari – 3, Manebhanjhyang Contact : 9842489471/9842010494
यहा अर्डर अनुसार सम्पूर्ण लेडीज कपडाहरु सिलाउनुका साथै स्कुल ड्रेस पनि सिलाइन्छ ! थप जानकारीका लागि Pro : Chandra Bdr Darji Khandbari – 3, Manebhanjhyang Contact : 9813456723/9840703989
जेम्स फर्निचर उद्दोग
अर्डर अनुसार सुपथ मुल्यमा आधुनिक डिजाइनका सम्पूर्ण फर्निचरहरु निर्माण गरिन्छ ! साथै कामाग्य ग्यास पनि भरिन्छ ! थप जानकारीका लागि Pro : Bikash Kusule, Khandbari – 10 Contact : 9862138287/9862055205